राजीनामाले उज्यालियो दाहालको छवि
कल्पना भट्टराई print
२०६६ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्दा पुष्पकमल दाहालले संसदीय व्यवस्थालाई भव्य गाली गर्नुभएको थियो। उनले त्यसरी नै गाली गरेका थिए जसरी उहाँ र उहाँको पार्टीले सशस्त्र विद्रोहताका गाली गथ्र्यो। त्यो दिन दाहालले गठबन्धनका दल, प्रतिपक्षी दलमाथि अचाक्ली तितो पोख्नु भएको थियो।
कार्यभार सम्हालेको करिब नौ महिनामा राजीनामा दिएका दाहालको अनुहारमा त्यो बेला तेजोबध थियो। ग्लानी थियो। आक्रोश थियो। पराजित हुनु पर्दाका क्लेषहरु उहाँको अनुहारमा कहीँकतै त्यसपछि पनि बचेको थियो।
यो बीचमा उहाँको नेतृत्वको पार्टी निकै चिरा पर्यो। केही चिरा फेरि जोडिए। नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्रमा बदलियो। उहाँकै पार्टीको नेतृत्व गर्दै तत्कालिन सहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। फेरि सरकारमा गएर माओवादीले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन।
गठबन्धन सरकारहरु परिवर्तन हुँदै गए। पछिल्लो चोटी पुष्पकमल दाहाललाई फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका जुर्यो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा १० महिनाअघि निर्माण भएको सरकारको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तैको सम्बोधनमा उहाँले भन्नु भएको थियो–यो गठबन्धनको सरकार हो। नौ महिना माओवादीले सरकार चलाउँछ त्यसपछि काँग्रेसले। माओवादी र काँग्रेसबीच यसका लागि भद्र सहमति भएको छ।’
त्यतिबेला धेरैलाई लागेको थियो–यस्ता भद्र सहमति दलहरुले जति चोटी गरेका छन् ती सबै तोडेका छन्।
नजिर खोज्न टाढा जानै पर्दैन थियो। दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ओली र दाहालबीच भएको भनिएको भद्र सहमति एमालेले पालना नगरेको भनेरै माओवादीले सरकारबाट एमालेको साथ छाडेको थियो।
त्यसैले पनि दाहालले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिक्कै भन्नु भएको भद्र सहमतिले नौ महिनापछि फेरि अर्को बबण्डर झिक्छ भन्ने धेरैको आँकलन थियो। बोलिएका लेखिएका कुराहरु दल र नेताहरुले पालना पनि गर्छन् र! यो कुराले आम मानिसमा घर गरेका बेला ती आंशकाहरुलाई पुष्पकमल दाहालले हिजो चिरीदिनु भएको छ प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर। उहाँले हिजो सिंहदरबारबाट राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा भन्नुभयो–इमानको राजनीति पनि बाँकी छ भन्ने प्रमाण हो मेरो राजीनामा।
यसो भनेर देशको सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी पद त्याग्दै गर्दा उहाँको अनुहारको तेज बढेको देखिन्थ्यो। पद छाड्नु पर्दाको पीर उहाँको मुस्कानमा कहींकतै झल्किएन। उहाँले कसैलाई गाली गर्नु भएन। नेपालको राजनीति अस्थिर छ। घात प्रतिघातले पिरोलिएको छ। छिमेकी देशको चलखेलले थिलथिलएको छ। यस्तो बेला दाहालको यत्ति कदमले प्रमाणित गरेको छ–बचनको लाज मात्र राख्ने होइन बचनको सम्मान गर्ने परिपाटी पनि नेपाली राजनीतिमा अझै छ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको मत परिणाममा जसको जित भए पनि आफ्नै जित भएको भन्दै गर्दा दाहालको आवाज मनकै थियो भन्ने लागेको छ। उहाँको राजीनामाको प्रशंसा र आलोचना बराबरी हुँदैछ जुन अस्वाभाविक होइन। यदि दाहालले राजीनामा दिनु भएको थिएन भने पनि उहाँको आलोचना हुन्थ्यो नै। आइजिपी प्रकरण, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायत यो सरकारले गर्नु नहुने काममा सूचीकृत भएका छन्। जसलाई दाहालको राजीनामासँग जोडेर आलोचना गरिदैंछ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा जोडिने भारतलाई उहाँको राजीनामा पनि कतिले जोडेका छन्। तर लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ।
भद्र सहमति अनुसार अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो गठबन्धन सरकारमा सम्मिलित दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हो।
यतिबेला स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मत गणना अन्तिम चरणमा छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा तोकिएको छ। दिन गन्ने हो भने अबको २० दिनपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कामकारबाही निक्कै अगाडि बढाइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दोश्रो चरणको चुनाव सार्ने खेल हो भनेर आरोप लाएको छ । त्यसैले अब यो २० दिनमा सरकारको बागडोर सम्हाल्ने ध्येयमा नलागेर शेरबहादुर देउवाले कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मातहतबाटै दोश्रो चरणको चुनाव सम्पन्न गराउन पहल गर्नुपर्छ। दोश्रो चरणको चुनाव गर्न मिलाउनु पर्ने मूल मुद्दामा मधेश छ। यो चुनाव सार्नु भनेको अघि बढी सकेको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पाइलामा भाँजो हाल्नु हो। त्यसैले काँग्रेस सभापति देउवाले अलिकति मन फराकिलो पार्नु पर्छ। दोश्रो चरणको चुनाव सक्नेबित्तिकै सत्ता सम्हाले हुन्छ। यति गरे मुलुक एउटा निकासको बाटोमा हिंड्छ। र अघिल्ला पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफूमाथि लागेका दागहरु धुने देउवालाई यो राम्रो मौका पनि हो। अब त उहाँलाई दाहालले भद्र सहमतिको उल्लघंन गर्लान् भन्ने डर पनि त छैन।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ११, २०७४ १४:११:३६